Wararka - Dhaqdhaqaaqa labada taayir ayaa caan ka ah adduunka oo dhan
Dhaqdhaqaaqa labada taayir ayaa caan ka ah aduunka oo dhan
Sida laga soo xigtay xogta sahanka kastamka Shiinaha, mugga dhoofinta ee Shiinaha ee baaskiilada korontada ee labada lugood leh ayaa kor u dhaaftay 10 milyan saddex sano oo isku xigta, walina wuu korayaa sannad kasta. Gaar ahaan qaar ka mid ah wadamada Yurub iyo Ameerika iyo wadamada Koonfur-bari Aasiya, suuqa baaskiilka korontada ayaa ku jira xilli kobac degdeg ah.
Dhaqdhaqaaqa labada taayir ganacsiga ayaa ku fiicnaan doona siyaasadda
Sababta xaaladdan sida hoos ku qoran waxay muujinaysaa, dhinaca kale, iyada oo ay jirto xaalad adag oo cudur ah oo dibadda ah labadii sano ee la soo dhaafay, baaskiilada laba taayirrada ah ee korontadu waxay noqdeen habka loo doorbido safarka maalinlaha ah ee dadku sababtoo ah shuruudaha ka hortagga cudurrada ee dalka .
Dhanka kale, sanadihii ugu dambeeyay, siyaasadaha dalal badan oo dibadda ah ayaa ka faa'iideystey warshadaha baaskiilka ee korontada: gaar ahaan, qaar ka mid ah wadamada Yurub, Ameerika iyo Koonfur-bari Aasiya ayaa si isdaba-joog ah u soo bandhigay siyaasado kabitaan ah oo lagu dhiirigelinayo dadka inay raacaan.
Tusaale ahaan, kabka dawladda Nederlaanku waxa ay gaadhi kartaa in ka badan 30% qaddarka iibka; Dawladda Talyaanigu waxay dhiirigelisaa safar kale waxayna siisaa kabitaan muwaadiniinta si ay u iibsadaan baaskiilada iyo mootada, ilaa 500 euro (qiyaastii 4000 yuan); Dowladda Faransiiska ayaa diyaarisay barnaamij kab ah oo gaaraya 20 milyan oo Yuuro si ay u siiso 400 oo Yuuro qofkiiba kabka gaadiidka ee shaqaalaha baaskiillada ku socda; Dawladda Jarmalka ee Berlin waxay dib u qorsheysay heerarka waddooyinka, balaadhinta wadiiqooyinka baaskiilka ee ku meel gaadhka ah, iwm., si ay u jirto gabaabsi goobta baaskiilada korontada;
Hindiya waxay ansixisay qorshayaasha qaranka ee baaskiilada korontada, iyo heerka canshuurta ee baaskiilada korontada ayaa laga dhimay 12% ilaa 5%; Indonesia waxay raacday isbeddelka baaskiilada korontada; Filibiin waxay si xooggan u dhiirrigelisay warshadaha baaskiilka ee korontada ku shaqeeya; dawladda Vietnam ayaa ku dhawaaqday in ay "mamnuucida mootooyinka" ka hirgelin doonto dalka. Waxaa ka mid ah, Ho Chi Minh City waxay mamnuuci doontaa mootooyinka laga bilaabo 2021.
Tirada iibka ku saabsan alaabada casriga ah/baaskiiladaha elektaroonigga ah ayaa kordhay
Waxyaabo badan oo wanaagsan ayaa dib u soo celin weyn u keenay ganacsiga dhoofinta baaskiilka korontada ee gudaha, gaar ahaan suuqa baaskiilka korontada ee caqliga leh. Waqtigan xaadirka ah, suuqa baaskiilka korontada ee Yurub iyo Ameerika ayaa ku socda isbeddello. Qaar ka mid ah baaskiil koronto oo heer sare ah, xariif ah, badbaado leh, shaqsiyeysan, iyo tignoolajiyada sare ayaa ah kuwa ugu caansan isticmaalayaasha. Kor-u-qaadista siyaasadda kabidda dawladda hoose waxay sii kicisay iibinta baaskiillada korantada. Tani sidoo kale waa kiiskii tan iyo markii uu dillaacay cudurka, shirkadaha baaskiilada korontada ee gudaha iyo qaar ka mid ah bixiyeyaasha xalinta baaskiilka ee korantada ayaa si joogto ah u sameeyay "xawaaraha iyo xiisaha" ee suuqa baaskiilka korontada ee dibedda, si joogto ah u soo bandhigay noocyo kala duwan oo caqli-gal ah iyo xalal caqli-gal ah. Baaskiil koronto oo laba lugood leh oo dibadda ah ayaa la kulma fursad sirdoon, heer sare iyo caalamiyeynta.
Sida bixiye xariif ah oo loogu talagalay baaskiilada korantada, TBIT waxay siisay adeegyo raadin meeleyn ah in ka badan 80 milyan isticmaaleyaasha baaskiilka adduunka oo dhan, iyo mugga dhoofinta baaskiilada korantada ee smart terminals ayaa dhaaftay 5 milyan. TBIT waa mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu weyn adduunka ee keena meelaynta qalabka baaskiilka iyo mootooyinka.
Iyada oo ay caanka ku yihiin baaskiilada korantada casriga ah ee suuqyada dibada, waxa aanu sidoo kale aragnay in suuqyada dibadu ay qabaan baahiyo kala duwan oo loo qabo alaabooyin casri ah, iyo xalalka caqliga leh ee TBIT ee baaskiilada korontada ku shaqeeya waxa ku jira suuq aad u weyn.
Gaar ahaan maalmahan dambe, amarrada ayaa cirka isku shareeray, waxaana dhammaan shaqaaluhu ay shaqaynayaan saacadaha dheeraadka ah iyaga oo aan joogsan. Aqoon isweydaarsiga, shaqaaluhu waxay ku mashquulsan yihiin inay ku shaqeeyaan mishiinnada, dhammaan khadka isku xidhka ayaa si habsami leh u socda. Qalabkii oo dhan wuxuu gaaray hawlgal hufan, wax walbana waxay u muuqdaan kuwo mashquul iyo nidaamsan.
Iyadoo ay weheliso yaraanta Chips-ka Elektarooniga ah ee sannadkan, waxa cirka isku shareeray alaabooyin badan oo cayriin ah, sidoo kale shixnadaha ka imanaya warshadda TBIT ayaa gabaabsi ah, waxaana jadwalka codsiga GPS-ku uu ku beegan yahay sannadka badhkiisa dambe.
Falsafada wax-soo-saarka ee tayada sare leh iyo gaarsiinta waqtiga waxay ku socotaa dhammaan silsiladda wax soo saarka ee TBIT. Baahida suuqyadu way isbedeshaa maalin kasta oo dhaafto, TBIT-na waxay isticmaashaa horumar kasta iyo hal abuur si ay u horumariso tayada iyo hufnaanta, iyo si tartiib tartiib ah u dhisto shirkad la aamini karo. TBIT waxay sidoo kale ku adkaysanaysaa samaynta alaabta ugu xirfada badan uguna fiican macaamiisha, isla markaana dammaanad qaadka tayada alaabta, waxaanu si badbaado leh ugu gudbin karnaa alaabta macaamiisha.